Sidaan buu yahay nidaamka dugsiyada iswiidhishka. | Skolverket nyanlända
Sidaan buu yahay nidaamka dugsiyada iswiidhishka.
ÈWixi ka bilaawdo markuu canugaada buuxiyo hal sano, wuxuu kuu dhigankara dugsiga xannaanada. Ciyaarta aad muhiim u tahay markey noqoto dugsiga xannaanada. Markuu canuga buuxinaayo 6 sano, bey dhammaan carruurta bilaabikaran fasalka ardeyda lix sano jirka. Dugsiga xannaanada iyo fasalka ardeyda lix sano jirka waa arrin ah tabarruc.
Dhammaan carruurta waxey bilaabaan dugsiga aasaasiga markey gaaraan 7 sano, oo in ey dhigtaan waa qasab. Sharciga oo waajibaadka dugsiga wuxuu ardeyga qasab ku tahay fasalka 1 ilaa 9, oo waa sagaal sano.
Markaas kadib dhallinyarada waxey saddax sano dhigtan dugsiga sare. Dhammaan xaq bey u leeyihiin iney bilaabaan dugsiga ilaa sanadka ey buuxinaayaan 20 sano. Dugsiga sare ardeyga wuxu u diyaarin inuu dhigankaro waxbarasho jaamacadeed, ama toos shaqo u bilaabo.